एक दिनमा पानी कति पिउने ? - हिमाल दैनिक
एक दिनमा पानी कति पिउने ?
२२ माघ २०७४, सोमबार १४:३५
कुनै पनि खाद्यपदार्थबाट थोरै–धेरै पानीको मात्रा पाइन्छ । तर, पानी नपिएर अन्य झोल पदार्थको प्रयोग गर्नुलाई पानी पिएको मानिदैन । कपिपयले पानीको सट्टामा जुस, चिया आदि पिउने पनि गर्छन् । तर, छुट्टै शुद्ध पानी नपिउँदा यसको कमीले गर्मी मौसममा डिहाइड्रेसन पनि हुन सक्छ । नयाँ पत्रिका
Prevपछिल्लोविसं २०७५ का लागि १३ पात्रो स्वीकृत
अघिल्लोजनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी काम गर्न मन्त्रीको निर्देशनNext
Contact us: himaldainik17[email protected]